Calendar 2014 “Farm” Ny Kalandrie - Famolavolana
Ny Kalandrie Ny kitapom-bolan'ny toeram-piompiana Farm dia mora angonina. Tsy mila lakaoly na hety. Angony amin'ny alàlan'ny fizarana miaraka amin'ilay marika mitovy. Ny biby tsirairay dia alimanaka roa volana. Ny famolavolana kalitao dia manana fahefana hanova ny habaka sy hanova ny sain'ireo mpampiasa azy. Manome fampiononana amin'ny fahitana, mitazona ary mampiasa izy ireo. Mihena izy ireo ary singa manaitra, manatsara toerana. Ny vokatra tany am-boalohany dia natao tamin'ny fampiasana ny foto-kevitry ny fiainana miaraka amin'ny Design.
Anaran'ny tetikasa : Calendar 2014 “Farm”, Anaran'ny mpamorona : Katsumi Tamura, Anaran'ny mpanjifa : good morning inc..
Talata 30 Novambra 2021
Ny Kalandrie Katsumi Tamura Calendar 2014 “Farm”